Uma ungumnikazi uyaziqhenya vacuum cleaner nge aquafiltering Thomas, yokuhlanza endlini ayisekho inkinga engathí sina. Uma kuphela ecabanga yokufuna kungenzeka ke lesi sihloko ukuphi. Khohlwa uthuli kokuzama ekuhlungeni zasesikhwameni cleaner wezindlu. Manje zonke esikhathini esidlule.
Thomas cleaner entsha zokuhlanza basebenze ehlukile. Bona sikulibazise endlini uthuli, izinto ezixabana nomzimba, impova, 1 kuphela litre amanzi kampompi. Lokhu kusiza hhayi kuphela ukufeza kakhulu yokuhlanza izinga, kodwa futhi ahlinzeke sezulu emnandi lonke endlini. Akhipha 100% futhi 99,9% impova uthuli olwenziwa izinto ezixabana nomzimba, okungase emoyeni. Vacuums nge aquafiltering Thomas - insindiso yangempela kubantu abaphethwe umzimba wakho uxabana ne uthuli.
Model uhla vacuum cleaner omkhathi Thomas
Ngenxa inqubo ezintsha, high quality, Thomas zokuhlanza ahlinzeke ngempumelelo enkulu ekuhlanzeni wonke evele ukuthi wasebenzisa ezomile noma ezimanzi spray uhlelo. Vacuum cleaner omkhathi basonta ingxenye premium e umthengi electronics emakethe. Bona ukuhlanza amatshe kanye nezigqoko phansi, kuhlanganise itshe yemvelo, amapulangwe aphansi kanye laminate flooring, Upholstery nezihlalo imoto. Isixazululo yokuhlanza enza izinto fibre, futhi ukungcola nje isuswe vacuo. ungakwazi ukuqeda kanye we abanenkani kakhulu ukungcola amabala. imodeli ngamunye ifakwe ngokuzenzakalela emazombezombe intambo yamandla.
Ezimakethe endlu Imishini zingatholakala okulandelayo-premium ingxenye amamodeli we-vacuum cleaner omkhathi Thomas: Twin T1 Aquafilter, Twin T2 Aquafilter, Twin TT Aquafilter, Genius S1 Aquafilter.
izindleko zabo impela high. Kodwa ungesabi. Inkampani German uye wazakhela uhla vacuum cleaner omkhathi Thomas Aqua +, okuzokwenza ukukhokhela yonke imindeni:
Yokungezwani komzimba & nomndeni.
Multi Hlanza X8 parquet.
Multi Hlanza X10 parquet.
Anti yokungezwani komzimba.
I izici eziyinhloko we onobuhle-premium ingxenye
Basuke ifakwe egeza HEPA Elihehayo, isikhwishikhwishi filtration uhlelo kanye injini Ukupholisa wesifunda microfilter. Ngaphezu kwalokho, injini ifinyelela amandla esiphezulu 1600 Watt, has Soft Touch inkinobho. Isibambo vacuum cleaner senziwa ephezulu material izinga, ke ukhululekile ukubamba esandleni sakho. hose lukathayela futsi lugucugucuke. imodeli ngamunye lula ukusebenza futhi spray indlela ekhethekile. Okufakwe ne vacuum cleaner yilezi:
Ukuxubha ngoba ukhaphethi.
Ukuxubha ngoba Upholstery.
Ukuxubha wokugezela amatshe.
Ukuxubha ukuze bahlanze Upholstery.
Ukugxilisa ingqondo ukhaphethi yokuhlanza.
Thomas yokuwasha wezindlu nge uhlelo filtration Aqua +
Le divayisi entsha ehlukile wokuhlanza amakhaya futhi abantu abanomzimba ongezwani nezinto ezithile. Thomas aquafiltering egeza vacuum cleaner omkhathi kukhona uchwepheshe emkhakheni yesondlo lenhlanzeko nenduduzo kulo indlu. Ngenxa eliyingqayizivele futhi lokuhweba Aqua +, emoyeni ubuchwepheshe esondele, oswakanyiswe yamanzi ejector, nothuli izinhlayiya nokungcola zazo ukusivumela, ahlale emanzini. Lokhu kusho ukuthi indlu uthuli ayisakwazi ubuyele ku emoyeni. Imane wathela emva ukusetshenziswa kanye amanzi angcolile. Ngenxa indlela ekhethekile amanzi nezisefo, Aqua + impumelelo ubuchwepheshe inikeza uthuli filtration at 99.99%. Ngesikhathi esifanayo emoyeni itsatfwa wezindlu, inqobo kwaba nomoya omuhle wokuthanda egumbini.
Esinye isici: multi-functional cleaner wezindlu kuyinto ikakhulukazi efanelekayo yokuhlanza mnene panel kanye parquet. I-apharathasi ifakwe umlomo wombhobho entsha ukuze bahlanze parquet yokuhlanza ezimanzi futhi omile, ke iqinisekisa i yokuhlanza olunembile izibuya okhuni.
Izinzuzo vacuum aquafiltering Thomas Aqua-Ibhokisi Compact
Le modeli isabelomali akhiwa umenzi German, has a usayizi sasivumela encane. Yingakho kuthandekile abaningi abantu bakithi. Ububanzi - 31,8 cm, ubude - 46,7 cm nobude -. 29,4 cm Naphezu usayizi obunesizotha, omnyama design nenhle silingane uhlelo esiyingqayizivele Aqua-Ibhokisi amanzi filtration. Inzuzo undoubted Kuyaphawuleka ukuthi ngenkathi vacuum cleaner kususa hhayi kuphela uthuli, kodwa futhi moisturizes emoyeni. Ngenxa yalokho, uyifinyelele imigomo eziningana. Okokuqala, humidify emoyeni. Okwesibili, uthuli luhlala ngaphansi kwethonya umswakama phansi, lapho ngokushesha kususa vacuum cleaner.
Ungacabangi ukuthi vacuum cleaner nge aquafiltering Thomas Aqua-Ibhokisi Compact kuphela efanelekayo zokuhlanza owomile ngokudlulisa. Lena ngokuphelele hhayi kweqiniso. Nguye yedwa okwazi ngayo ukuba abhekane nobuhlungu ngisho esincane ketshezi phansi. Ungakhathazeki, ungakwazi overdo it nge ubungako balokho okusamanzi eziqoqiwe. Uma senani idlula 2 amalitha ke cleaner wezindlu ngeke ngokuzenzakalelayo shaqa ngethangi amanzi.
Izingxenye kanye izesekeli
Uma aquafiltering ngoba uThomase Twin Panther cleaner wezindlu awahlelanga, ungakhathazeki. Kunezindlela eziningana ukuxazulula le nkinga. Okokuqala, uma kungekhona aphume iwaranti kamakhi, singakwazi ngokuphepha isicelo isikhungo service ongasisiza ukuqeda izinkinga ezikhona. Uma aquafiltering ngoba yokuwasha wezindlu Thomas Twin wakhonza isikhathi eside futhi umphumela lewaranti iphelile, ungakhathazeki. Ungathenga ke kamakhi ngentengo ephansi. Ngo ukungakhethi, kufanele kuphawulwe ukuthi izingxenye ze-vacuum cleaner aphume oda ezingavamile kakhulu. Phela, izinga German - siyisiqiniseko kweminyaka eminingi isevisi nokwethembeka. Uphenyo Thomas nge aquafiltering cleaner wezindlu - ubufakazi.
Umenzi ukhathazekile induduzo amakhasimende abo. Ngakho-ke, ukuze athole imiphumela emihle ngesikhathi yokuhlanza Kunconywa ukusebenzisa eziklanyelwe nemikhiqizo yokuhlanza. Zivezwa emashalofini njengoba Thomas Protex ugxilisa zonke izinhlobo wokugeza vacuum cleaner omkhathi. La mathuluzi zenzelwe zonke izinhlobo evele: ukhaphethi, Upholstery, Uthwale phansi, njll Le nkampani inyathelisa anhlobonhlobo nemikhiqizo yokuhlanza, okuyilezi:
ProTex - jikelele uhlamvu okokuhlanza for yokuhlanza Upholstery, uvolo okhaphethi, angangenwa manzi yendwangu ezinengilazi kanye nanoma yimiphi eminye evele.
ProTexF - ikhambi jikelele, esivikela yendwangu fiber noma ikuphi ukungcoliswa okwalandela.
ProFloor senzelwe ukugeza isembozo phansi: PVC evele, ama-tile, zemabula nabanye.
ProTexV esetshenziselwa ukuhlanza ukungcola kusukela isikhumba noma ifenisha elithambile, flooring futhi lakhiwa al.
What do abanikazi ejabulile, ebheke phambili German zasendlini inkampani?
Amalungu uqaphele ukuthi vacuum cleaner omkhathi Thomas aquafiltering ngokuphelele ukubhekana ngokuphumelelayo imisebenzi yabo. Zihlukahlukene umkhiqizo uhla ivumela ikhasimende ngalinye ukuthenga kahle ukuthi ufuna nokuthi kubalulekile kakhulu. Inzuzo undoubted kuyinto ukutholakala esinamandla vacuum cleaner omkhathi aquafiltering, olubamba zonke uthuli futhi ayikuvumeli lona ukuze axazulule emuva egumbini.
Abantu abaphethwe komzimba, wazi ukuthi nge obhekwe umsizi isimo sempilo yabo iye yathuthuka kakhulu. Aquafiltering ngoba uThomase Twin TT cleaner wezindlu kususa ngokuphelele yonke insila moisturizes emoyeni, okwenza kube lula ukushaya futhi sakwazi ukuphefumula.
Omunye izinzuzo ucingo sithola okufanele ngemali esiyikhokhayo. Lokhu akusona isimanga, ngoba izindleko lisebenze ekhaya kuyinto ebanzi intengo uhla, kusukela umnotho onobuhle, njenge-vacuum cleaner nge aquafiltering Thomas Aqua-Ibhokisi Compact, kumadivayisi premium ezifana Thomas Twin TT Aquafilter. Abanikazi kanye nomunye imodeli aveze ukuthi vacuum cleaner isebenza ngaphandle kwezinkinga iminyaka eminingi.
Omama bamakhaya kusho izakhamuzi ngazwi linye batshelwa ukuthi izindlu yayiyindawo isheshe. Lokhu kuchazwe kalula, ngoba izinto zokuhlanza cleaner abakwazi kuphela ukuhlanza amatshe, kodwa futhi ukugeza phansi. Lokhu konga isikhathi hhayi kuphela, kodwa amabutho nezinzwa abalandeli lenhlanzeko nenduduzo.
Kodwa kukhona ngempukane namafutha - akukho izinto ekahle. Ezinye German umnikazi vacuum cleaner omkhathi bathi kukhona isidingo isihlungi esikhundleni. Kwenze kuwufanele wonke izinyanga eziyisithupha, okungenani. Kodwa ngesikhathi esifanayo, inqubo enjalo akusho hit esiningi ibhajethi umndeni, ngoba izindleko lemifanekiso zokhahlamba kusuka ruble 500 kuya ku-2000.
Indlela ukunquma on ukuthengwa kanye ukukhethwa onobuhle
Umenzi uqinisekisa izinga imikhiqizo, izibuyekezo zamakhasimende lingama omuhle, kodwa izinga German iyenziwa iminyaka. Ngakho ungacabangi isikhathi eside, futhi kumele kuthunyelwe ukuthengwa eliphezulu yokuwasha wezindlu nge aquafiltering Thomas. Umbuzo kuphela ongeke ezibhekene umthengi - ukukhethwa imodeli. Lapha-ke kufanele aqondiswe umthamo zayo ezingokwezimali. Kodwa khumbula ukuthi iyiphi ukuthenga kuyokulethela injabulo kuphela.
Indlela ukususa papilloma? Izindlela ephumelela kunazo
Umsuka, ikakhulukazi ukusetshenziswa kanye nencazelo phraseological "ihhashi is amanga"